घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू अल्जेरियन फुटबल खेलाडीहरू Yacine Adli बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हामी Yacine Adli बचपन कहानी, जीवनी, प्रारम्भिक जीवन, प्रेमिका तथ्य, परिवार पृष्ठभूमि, अभिभावक, व्यक्तिगत जीवन र जीवन शैली को पूरा कभरेज प्रस्तुत गर्दछौं। यो शुरुआती दिनदेखि लिएर जब उहाँ प्रख्यात भएमा उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण विश्लेषण छ।
प्रारम्भिक जीवन र यासिन एडलीको उदय। ।: इन्स्टाग्राम र ट्विटर
हो, तपाइँ र मलाई थाहा छ कि आक्रमणकारी मिडफिल्डर मानीन्छ युरोप मा एक राम्रो युवा मा एक नजर राख्न। यद्यपि केवल थोरैले याकिन एडलीको जीवनी पढेका छन् जुन अत्यन्त प्रभावशाली छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Yacine Adli बचपन कहानी:
सबैभन्दा पहिला, फुटबलरका आमा-बुबाले उसलाई नामाकरण गरे Zinedine Zidane, एक उपलब्धि जसले उसलाई पूरा नाम दिएकी छ - यासिन Zinedine Adli। उहाँ जुलाई २००० को २ th तारिखमा, फ्रान्सको पेरिसको दक्षिणपूर्वी उपनगरहरुमा अवस्थित एउटा सानो कम्युन भिट्री-सुर-सेइनमा जन्मनुभएको थियो।
यासिन अड्ली उनका आमा बुबा, श्रीमती र श्रीमती अब्देनर एडलीको बीच मिलनबाट जन्मेका तीन बच्चाहरू मध्ये एक हुन्। फ्रान्सेली फुटबलर एक खुसी बच्चाको रूपमा हुर्कियो, साथ साथै उसकी जेठी बहिनी र भाइ जो लुनेस एडली नामबाट जान्छन्।
अडली परिवारको कान्छो बच्चा भएकोले उनी आफ्नो परिवारको बच्चा हुन् भनेर प्रमाणित गर्दछ। प्रारम्भमा, अब्देनर (यासिनका बुवा) ले आफ्ना सबै बच्चाहरूलाई चार बर्षको उमेरमा पढ्न सिक्ने कुरा सुनिश्चित गरे। सानो याकिन एक अपवाद थिएन।
यति धेरै, यासिन एडलीका अभिभावकहरूले आफ्ना दाइ / दिदीबहिनीलाई बढी जिम्मेवारी दिएका थिए, उनी आफै पनि बेवास्ता गरिरहेका थिए। उसको आमा र बुबाले धेरै घरको काम गर्न पठाइएको छैन र जवान केटाले फुटबलको लागि आफ्नो समय दिइरहेको देखे। यो उपलब्धि नियत संग उनको प्रारम्भिक मिति गर्न को लागी।
तल चित्रित, प्यारा केटाले PSG लाई एक बच्चाको रूपमा समर्थन गरे र उनको नामको एक विशाल प्रशंसक थियो Zinedine Zidane जसलाई उसले मूर्ति मात्र देख्दछ।
युवा यासिन एडलीले PSG लाई बच्चाको रूपमा समर्थन गर्‍यो। ।: ट्विटर।
Yacine Adli परिवार पृष्ठभूमि:
फुटबल फुटको बच्चा, साथी फ्रान्सेली गोलकी भन्दा फरक ह्यूगो Lloris र अरबपति फुटबलर, Faiq Bolkiah एक सुपर धनी घर मा जन्म भएको थिएन। धेरै औसत कमाईहरू जस्तै, यासिन एडलीका आमाबुवाहरू टाइपहरू मध्ये एक थिए जसले त्यस्ता मध्ये एकमा बस्यो परिधीय छिमेकहरू प्राय: भिट्री-सूर-सेनको मध्यम-वर्ग जनसंख्याद्वारा बसोबास गर्छन्।
यासिनले भेट्री-सुर-सेइनमा शुरुआती वर्षहरू खुशी पारेकी थिए, पेरिस शहर केन्द्रबाट ११.k किलोमिटर टाढा रहेको फ्रान्सेली कम्युन। जस्तै फुटबलरहरू मन पराउँदैनन् इब्राहिमा कोनाटे जो बच्चाको रूपमा पेरिसमा बसोबास गर्थे, यासिन एडलीको परिवार केवल उपनगरहरूमा बस्न सक्ने थियो।
फ्रान्सेली जीनियस भिट्री-सूर-सेइनमा हुर्किए। अझ, उनको परिवारको घर पेरिसको लागि लगभग ११..11.6 किमि थियो। ।: गुगल छविहरू र आईजी
यासिन एडली परिवार मूल:
उसको प्यारा अरबी रूपहरुबाट हेर्दा, हामी जान्दछौं तपाईंले सायद चिन्तित गर्नुभएको छ, यासिन एडलीको आमा र बुवाको जन्म भएको देश थाहा पाएर। सत्य यो हो कि फुटबलर पनि लिजेन्ड्रीजस्तै Zinedine Zidane, उसको परिवार उत्तरी अफ्रिकाबाट छ, ठीक अल्जेरियाबाट।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... यायाकिन एडलीका दुबै आमाबुबाको जरा उत्तरी अल्जेरियाको पहाडी समुद्री तटमा अवस्थित कबाइली गाउँबाट भएको हो। साथी फुटबलर जस्तो नभई, रियाद मह्रेज, यासिन एडलीको परिवारले उनलाई २०१२ अफ्रिकी कप अफ नेशन्स विजेताहरू (अल्जेरिया) को लागि खेल्ने सम्भावनाको बारेमा अझै अपडेसन दिएका छैनन।
Yacine Adli शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
धेरै फुटबल उत्सुक बच्चाहरू जस्तै पेरिसको उपनगरहरुमा हुर्किएकी, याकिनका आमाबुवाहरूले उनलाई शुरुमा फुटबलको लागि आफ्नो शिक्षामा सम्झौता गर्न अनुमति दिएनन्। फ्रान्सेली वेबसाइट अकुफुट, २०१ 2017 को एक रिपोर्टमा फुटबलरले कसरी कक्षामा बौद्धिकता प्रदर्शन गर्‍यो भनेर वर्णन गरेको छ। यासिन अड्ली यस स्मार्ट विद्यार्थी थिए जो आफ्ना साथीहरूको बीचमा उभिए।
उहाँलाई चिन्ने सबैले यो कुरा स्वीकार गर्दछन् कि फुटबलर एक बुद्धिमान बच्चा मात्र थिएन, तर प्रतिस्पर्धी साथै विशेष गरी खेलकुदको क्षेत्रमा। ऊ फुटबल, जुन उसले घर र स्कूलमा खेल्छ त्यो मात्र खेल थियो जसले उसलाई उत्साहित बनायो।
जब समय सही भयो, खेलको लागि जोशले यासिन एडलीका आमा बुबाआमाले आफ्नो छोरालाई फुटबल क्यारियरको लागि उनको शिक्षा जोखिममा पार्न अनुमति दिए।
कसरी फुटबल शुरू भयो:
आफ्नो क्यारियरको आधारशिला राख्नको लागि एक कदम चालेर, यासिन अड्लीले उनको बुवालाई उनको युएस भिल्जुइफमा उनको परिवारको घर नजिकको क्लबमा दर्ता गराए। धन्यबाद, उहाँ एक सफल परीक्षण थियो।
आफ्नो क्यारियरको शुरुआती दिनहरूमा, जवान केटा एक नाटकको विक्स बच्चाको रूपमा विकसित भयो, जसले केवल आफ्नो नाटकका लागि मात्र होइन तर उत्कृष्ट काम गर्ने नाममा धेरै अनौंठो बलिदानहरू प्रदान गरेर धेरै नाम कमायो।
एक पटक, उनको प्रशिक्षक मौले चेब्बले यासिन अडली सफल हुने संकल्पको एक खाता दिए। पूर्व कोचको शब्दमा;
यासिन स्टेडियममा सुतिरहेकी थिई, जुन मैले उनलाई हरेक दिन गरेको देख्थें। ऊ एक जोशिलो र मेहनती बच्चा थियो।
जवान केटा हराउने विचार गर्न सकेन। ऊ फुटबललाई माया गर्छ, कुरा गर्छ र खान्छ।
उसले मलाई भेट्न आउँदा पनि उसले बललाई लात नलगाईकन छोड्दैन।
Yacine Adli जीवनी- फेम कहानी कहानी:
कडा परिश्रम र नम्रता मार्फत, युवा यासिन कुनै पनि समयमा युएस भिल्जुइफमा खेल्ने सबै बच्चाहरू मध्ये सबै भन्दा राम्रो खेलाडी भयो। एउटा कुरा निश्चय भयो कि त्यसबेला उनी सबैभन्दा उज्यालो भए। यो तथ्य यो थियो कि ठूला क्लबहरू, PSG को मनपर्दो उसको प्रतिभाको लागि छापे आउँदछन्।
अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न र फ्रान्सेली राष्ट्रिय युवालाई बोलाउन खोज्न, यासिन एडलीका आमा-बुबाले उनीहरूको छोरालाई पीएसजीमा सहभागी हुन अनुमति दिए। धन्यबाद, उदीयमान फुटबल स्टारले फ्रान्सेली जियान्ट्समा सामेल भएको दुई वर्ष बित्तिकै फ्रान्सेली U16 कल अप प्राप्त गर्‍यो।
जब उसको परिवारले परम बलिदान गरे:
आफ्नो छोराको सफलताको चाहनालाई मान्यता दिँदै यासिन अड्लीका बुबा अब्देनरले आफ्नो छोराको विकासमा ध्यान दिनको लागि जागिर छोड्नुपर्‍यो। अदली परिवारको कान्छो छोराले यसलाई ठूलो बनाउँदैछ भनेर, यासिन ठूलो भाई, लुनेसले पनि आफ्नो सानो भाइलाई सहयोग गर्ने आशामा एजेन्ट लाइसेन्स कोर्स गर्ने निर्णय गरे।
Yacine Adli जीवनी- उनी कसरी सफल भए:
कडा मेहनत र पारिवारिक प्रयासहरूको एक समूहको लागि धन्यवाद, आशाजनक फुटबलर आफ्नो युवावस्थामा सबैभन्दा अभिलाषित मिडफिल्डर्स मध्ये एक बन्नुभयो। तल देखिए अनुसार, यासिनले दुबै एकेडेमी र राष्ट्रिय स्तरमा धेरै सफलता प्राप्त गरे।
क्लब र देश अन्तर्गत युवा क्यारियर होन फ्रान्सेली फुटबलर को लागी एक ठूलो सफलता थियो। ।: इन्स्टाग्राम
वर्ष २०१ In मा, फिक्का बच्चा PSG युवाबाट उडान रंगहरूमा स्नातक भयो। स्नातक पछि, उनले पेरिस सेन्ट-जर्मेन बी संग एक बर्ष बिताए। त्यहाँ छँदा, मुख्य प्रशिक्षक Unai Emery, जवान दयालु आफ्नो शुरुआत गर्न सहयोग गर्न पर्याप्त दयालु थियो।
१ 18 बर्षको वरिष्ठ खेलाडी हुनुको मतलब पीएसजी जस्तो टोलीको लागि प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नु हो। सर्वप्रथम, आफ्नो प्यारो एमरीको आर्सेनलमा प्रस्थानले मोड़ सिर्जना गर्‍यो। को प्रस्थान पछि हारून रस्सी, एमरी गनर्स मिडफिल्ड र दुबैलाई बढावा दिन विकल्पहरूको खोजीमा थिए Denis Suarez यासिनीको साथ शीर्ष उम्मेद्वार बने।
दुःखको कुरा, त्यस पछि नयाँ PSG कोच पछि स्थान्तरण रोकियो थमस टुकेलs हस्तक्षेप साबुन ओपेरा अन्तमा Unai Emery ले जाने निर्णय गरे पछि समाप्त भयो Mattéo Guendouzi। उहाँमाथि अन्य उच्च-स्तरीय PSG मिडफिल्डर्सको अधिक निजीकरणको कारण, एउटा पुरानो यासिन एडलीले बोर्डोमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने निर्णय गरे, जुन उनले उडान रंगका साथ गरे (भिडियो प्रमाण तल)।
यासिन एडलीको जीवनी राख्ने समयमा, पीएसजी टीन प्रोडिगी पहिले नै एफसी जिरोन्डिन्स डे बोर्डोको साथ आफ्नो नाम बनाउँदैछ।
FC Girondins de Bordeaux मा सर्ने निर्णयलाई भुक्तान गरियो। ।: G-छविहरू
यासिन बिस्तारै तर निश्चित रूपमा एउटा मध्ये बढ्दै छ युरोपमा सबै भन्दा 'बहुमूल्य' केन्द्रीय मिडफील्डर्स। बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
Yacine Adli Life Life- प्रेमिका, पत्नी?
आफ्नो नाम बनाउनु भएदेखि, जिज्ञासु प्रशंसकहरूले फ्रान्सेली फुटबलरको सम्बन्ध जीवन बारेमा सोच्न थालेका छन्। सत्य बोल्न, यासिन अड्ली एक शीर्ष १० मध्ये एकको लागि हाम्रो छनौट हो धेरै सुन्दर फुटबल खेलाडीहरू हाल यस ग्रहमा त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्दैछ कि उसको प्यारो हेराइले सम्भावित प्रेमिकालाई आकर्षित गर्दैन - जसले आफूलाई पत्नी सामग्री सम्झन्छन् पनि।
किनकि उहाँ अग्लो र सुन्दर हुनुहुन्छ, प्रशंसकहरूले सोधेका छन् ... याकिन अड्लीको प्रेमिका को हो? ।: इन्स्टाग्राम
सुन्दर फुटबलर लेखनको समयमा आफ्नो प्रेमिका वा उनको भावी पत्नी हुन सक्छ जो प्रकट छैन एक सचेत प्रयास गरेको देखिन्छ। जे होस्, यो हुन सक्छ कि यासिन एकल छ (लेख्ने समयमा), यो भनाइ हो जसले एक वैगको अस्तित्वलाई जनाउँदछ।
ठिक छ, तपाईं र मलाई थाहा छ फुटबल अन-माफ हुन सक्छ जब यो डेटि matters मामिलाहरूसँग मिसिनको लागि आउँदछ, विशेष गरी यो पहिलो क्यारियर चरणमा। यो य्यासिनले आफ्नो प्रेमिका प्रकट गर्न नसक्नुको कारण हुन सक्छ।
Yacine Adli व्यक्तिगत जीवन:
फुटबलबाट टाढा, फुटबलरको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने पहिलो गुण भनेको उसको "परिपक्वता" हो। उनका ठूला भाई लुइसले भनेका थिए कि याकिन एक लजालु र विचारशील व्यक्ति हुन्, जसले आफू हुर्केको देख्नेहरूसँग बलियो सम्बन्ध राख्दछ। यो, अरूहरूको बीचमा, किन सबैलाई मनपर्दछ।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा पनि, उदाउँदो तारामा क्यान्सर राशि चिन्हको विशेषताहरू छन्। के तपाईंलाई थाहा छ?… ती गुणहरू मध्ये एक क्यान्सर राशि चक्रव्युक्त व्यक्तिहरू तिनीहरूको नजिक वा पानीमा आरामको लागि तिनीहरूको समान्यता हो।
फ्रान्सेली स्टारको व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरूले तपाइँको बारेमा उसलाई कहिल्यै थाहा नपाउने चीजहरू प्रकट गर्दछ। ।: इन्स्टाग्राम
प्रायः आफ्नो भाइसँग, यासिन एडलीले चेस खेल्छ। फुटबल ताराले भोइलिन, पियानो र गितार मन पराउछ। उसले इयर ट्रेनिंग प्रयोग गरेर गितार खेल्न सिक्यो। अड्लीले एक पटक भनेका छन कि यदि उनका बुबाले उसलाई संगीत स्कूलमा नाम दर्ता गरेको भए उनी प्रेम गर्थे।
Yacine Adli जीवनशैली:
कसरी फुटबलरले आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ?… र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, त्यहाँ विदेशी जीवनशैली जस्तो त्यस्तो कुनै कुरा छैन। सुरुमा, यासिन अड्ली जसको कुल सम्पत्ति approximately €००,००० युरो छ एक संगठित जीवन बिताउँछ, एक ठूला घरहरू र चम्किलो कार जस्ता चीजहरूमा तर्कहीन खर्चबाट वञ्चित।
यासिन एडलीको जीवनशैली- कसरी फुटबलरले आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ, 📷: आईजी
Yacine Adli पारिवारिक जीवन:
धेरै जसो मानिससँग फुटबलरहरू छन् उनीहरूको घर बनाउने प्रयास गर्दछन्, एक दिन, गर्वका साथ परिवारको नाम सबैको सब भन्दा ठूलो चरणमा बोक्दछन्। यो उदाउँदो फ्रान्सेली ताराको मामला हो। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई यासिन एडलीका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा-बुबाबाट शुरू गर्ने बारेमा अझ बढी कुरा गर्ने छौं।
Yacine Adli बुबा र आमाको बारेमा:
सुरूवात गरेर, दुबै आमाबाबुहरू दुबै दर्शनका विचारधाराहरू हुन् जसले आफ्ना तीन बच्चाहरूसँगै मिलेर घनिष्ठ पारिवारिक घर बनाउँछन्। के तपाईंलाई थाहा थियो?… अब्देनर र उनकी श्रीमतीले प्रेरणा लिए लेब्रोन जेम्स, किलियन एमपीपी र नेमार फुटबल केन्द्रित घर चलाउन। दुबै यासिनका बुवा र आमाले माथिका फुटबलरहरूलाई उनीहरूको क्यारियरमा विशाल पारिवारिक उपस्थितिको रूपमा देख्दछन्।
हाम्रो आडलीको प्रख्यात जीवनी कथा को मार्ग मा उनको बुबाले आफ्नो कामलाई छोड्ने अन्तिम बलिदान गरिरहेको देख्यो ताकि उसले आफ्नो छोरालाई अत्यन्त उच्च स्तरमा समर्थन गर्न सकोस्। आज अब्देनर आफ्नो छोराको सफलताको फसल काटिरहेका छन्।
Yacine Adli भाई बहिनीहरू:
अनुसार यूरोपोस्पोर्ट फ्रान्स, यासिनकी जेठी बहिनी र एक भाईको नाम छ लाउन्स अड्ली। सबैभन्दा पहिला, उनकी जेठी बहिनी स्नातक हुन् जसले संचार र मार्केटिंगको अध्ययन गर्छिन्, आफ्ना भाइलाई सहयोग गर्नका लागि क्षेत्र प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणले।
अर्कोतर्फ, यासिनको ठुलो भाई (लुन्स एडली) पनि विश्वविद्यालयको स्नातक हुन् जसले अर्थशास्त्र व्यवस्थापनको अध्ययन गरेका थिए। आफ्नो पढाइ सिध्याएपछि, लुइसले आफ्नो एजेन्ट इजाजत पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने दृष्टिकोणले पाठ्यक्रम लिए। ठूला भाईले त्यसो गरे ताकि ऊ यासिनको क्यारियरमा पनि उपयोगी हुनेछ। कस्तो घनिष्ठ परिवार!
Yacine Adli तथ्य:
तथ्य # १- उसको खराब तलब भत्काउनाले उसको व्यक्तित्व प्रकट गर्दछ:
फुटबलरले PSG छोड्ने लिग प्रतिद्वन्द्वी एफसी Girondins डी बोर्डो पूर्णतया पैसाको लागि छैन जुन उसको तलब बिगार्नेमा अवलोकन गरिएको छ। यासिन एक परिपक्व फुटबलर हो जसले जान्दछ कि उसले कहिले पनि करियर र आय दुवैको दृष्टिमा ठूलो बनाउनेछ।
प्रति वर्ष € 336,000 £ 297,121 $ 368,608
प्रति महिना € 28,000 £ 24,760 $ 30,717
प्रति हप्ता € 7000 £ 5,705 $ 7,078
प्रति दिन € 1000 £ 815 $ 1,011
प्रति घण्टा € 41.6 £ 33.96 $ 42
प्रति मिनेट € 0.69 £ 0.57 $ 0.71
प्रति सेकेन्ड € 0.01 £ 0.009 $ 0.01
यो के हो YACINE ADLI कमाई गरिएको छ किनकि तपाईं यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… औसत फ्रान्सेली नागरिक जसले लगभग € 3,093 कमाउँछ उसले यसको लागि काम गर्न आवश्यक पर्दछ नौ बर्ष र एक महिना Yacine एक महिना मा कमाउँछ के गर्न को लागी। वाओ! यसको मतलब उसको तलब त्यति सानो छैन जति हामीले सोचेका थियौं।
तथ्य # १- फिफा संभावना:
यासिन, उनको १ of वर्षको उमेरमा, एउटा बन्ने सम्भावना छ महानतम मिडफिल्डर्स उसको पुस्ताको। यस कोमल उमेरमा, foot फिट १ मिडफिल्डर पहिले नै बल कन्ट्रोल, दर्शन, कम्पोजर, एफके सटीकता, शट पावर, ड्रिबलिंग र छोटो पासिंगको साथ ब्लासि। भइरहेको छ।
फिफा सम्भावितले देखाउँदछ कि ऊ आफ्नो पुस्ताको महान मिडफिल्डर्स मध्ये एक बन्न लागेको छ। 📷: SoFIFA
तथ्य # १- उसले आफ्नो एजेन्ट शीर्ष फुटबलरहरूसँग साझेदारी गर्दछ:
के तपाईंलाई थाहा छ? ... यासिन अड्लीसँग एजेन्ट छ परिवारका सदस्यहरूको हस्तक्षेपको बाबजुद उसलाई व्यवस्थापन गर्न। फुटबलरले साथी फ्रान्सेली प्लेयरहरू-जस्तै मनपर्दोसँग समान एजेन्ट साझा गर्दछ Moussa Sissoko, Ousmane Dembele र लेविन कुर्जावा।
तथ्य # १- ऊ जिदानको साथ समान नाम धारण गर्दछ:
के तपाईंलाई थाहा छ? ... यासिन अड्लीका बाबुआमाले उनको जन्ममा फ्रान्सेली फुटबल लीजेन्ड पछि उनको नाम (ज़िनेडाइन) राखे Zinedine Zidane। नाम सम्भवतः दुई कारणका लागि उसलाई दिइएको थियो। पहिलो तथ्य योसिन एडलीको परिवारको जस्तै अल्जेरियन मूल हो फ्रान्सेली १ 1998 XNUMX। विश्व कप विजेता, जिदानेसँग।
दोस्रो, यो फुटबलरलाई सम्मान गर्ने एउटा तरिका हुन सक्छ, फ्रान्स १ 1998 XNUMX world को विश्वकपमा उनले गरेका कारनामहरूका लागि। याद गर्नुहोस्, हाम्रो आफ्नै Yacine विश्व कपको दुई बर्ष पछि जन्मेको थियो।
पूर्ण नामहरू: Yacine Zinedine Adli
जन्मे: २ July जुलाई २००० (उमेर १ May मे, २०२० मा)
पारिवारिक मूल: काबाली गाउँ, अल्जेरिया।
अभिभावक: श्रीमती र श्रीमती अब्देनर एडली
भाइ: लुनेस एडली (एक एजेन्ट)
बहिनी: उनी संचार र मार्केटिंगको स्नातक हुन्
फिटमा उचाई: Feet फिट र inches इन्च
मीटरमा उचाई: 1.86 m
रुचि: भायोलिन, पियानो र गितार बजाउँदै।
कुल मूल्य: € 300,000 (मे, २०२० आंकडा)
Yacine Adli को बचपनको कहानी र जीवनी पढ्नको लागि धन्यबाद। हामी आशा गर्दछौं तपाईंले रमाईलो गर्नुभयो। LifeBogger मा हाम्रा सम्पादकहरू दैनिक जीवनको दैनिक जीवनमा सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रारम्भिक जीवन कथा र फुटबलरहरूको जीवनी वितरणको लागि प्रयास गर्दछन्।
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा यदि तपाइँ यस्तो चीज देख्नुहुन्छ जुन Adli मा यस लेखमा ठीक देखिँदैन। अन्यथा, हामीलाई टिप्पणी खण्डमा भन्नुहोस्, जुन तपाईं एक राम्रो सम्भावनाको साथ फुटबलरको बारेमा सोच्नुहुन्छ।